Bus Torres SL no tompon'andraikitra amin'ny fikarakarana ny angon-drakitra manokana ny mpampiasa tranonkala ity. Isika Mariho fa ireo antontan-kevitra dia ampiasaina araka ny fepetra voalazan'ny Fitsipika (EU) 2016 / 679 ny Parlemanta Eoropeana sy ny Filankevitry ny 27 Aprily 2016 momba ny fiarovana ny olona momba ny fanodinana ny tahirin-kevitra manokana sy ny hetsika maimaim-poana ny tahirin-kevitra toy izany.
1.- Tanjona momba ny fitsaboana: Izany dia ny mitazona fifandraisana ara-barotra miaraka amin'ny mpampiasa an'ity tranonkala ity. Mba hanatanterahana ny fitsaboana, ny tetikasa kasaina hatao dia:
.- Ny baikon'ny fangatahana, fangatahana na karazana fangatahana rehetra ataon'ny mpampiasa amin'ny alàlan'ny endriky ny fifandraisana izay omena anao.
2.- Conservation of data: dia ho voatahiry izy ireo raha toa ka misy tombotsoa iraisana amin'ny fitazonana ny faran'ny fitsaboana. Rehefa tsy ilaina intsony izy ireo amin'izany tanjona izany, dia hofoanana amin'ny fepetra fiarovana azo antoka izy ireo mba hiantohana ny fandringanana tanteraka azy ireo.
3.- Fifandraisana amin'ny angona: Ny mpampiasa dia manohana ny zon'ny fahazoana, ny fanitsiana, ny famafana, ny fanoherana ary ny fampitaovana ny angon-drakitra. Tahaka ny zo hitondrana fitarainana miaraka amin'ny manampahefana mpanara-maso, www.agpd.es , raha heverinao fa tsy mifanaraka amin'ny fitsipika amin'izao fotoana izao ny fitsaboana.
4.- Natokana ho an'ny fampahalalana nomen'ny mpampiasa: Ny mpampiasa amin'ny alàlan'ny fanamarihana ny boaty mifanaraka aminy dia manaiky sy manaiky tanteraka ary manaiky fa ilaina ny angon-dry zareo mba hamaliana ny fangatahan'ny mpamatsy. Ny mpampiasa dia miantoka fa ny fampahafantarana manokana dia nomena ny marina ary tompon'andraikitra amin'ny fampitana ny fanovàna azy.